नेपाल आज | बिमा कम्पनीहरु एकाएक उचालिंदा नेप्सेमा छायो हरियाली, बजार बढ्नुमा के छ कारण ?
आइतबार, ११ जेठ २०७७
बिमा कम्पनीहरु एकाएक उचालिंदा नेप्सेमा छायो हरियाली, बजार बढ्नुमा के छ कारण ?
मङ्गलबार, ०४ बैशाख २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । बिमा कम्पनीहरु उचालिंदा सेयर बजारमा नयाँ रौनक देखिएको छ । यसअघि बेस्सरी घटेको बिमा कम्पनीहरुमा मौका छोप्नेहरुले २ दिनमै आकर्षक लाभ लिएका छन् । तर निरन्तर घटेको बजारमा बिमा कम्पनीहरु मात्र बेस्सरी उचालिंदा बजार कत्तिको दिगो हुन्छ भनेर थाहा पाउन सुक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक छ । जे होस्, निरन्तर बजार घट्दा आहात बनेका लगानीकर्तालाई अहिले बल्ल राहत मिलेको छ । सस्तोमा किनेर महँगोमा बिक्री गर्नेले लाभ हासिल गरेका छन् ।
समग्र बिमा कम्पनीहरु उचालिंदा बाँकी अधिकांश समूहहरुका सूचकमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । तर पुँजी बजारमा वर्चस्व रहेको बैंकिङ समूहमा भने खासै उत्साह आउन सकेको छैन । माइक्रोफाइनान्स र होटेल समूहमा भने राम्रै बढोत्तरी देखिएको छ । समग्र बजार माथि जान बैंकिङ समूहमा पनि सुधार हुन जरुरी छ ।
नयाँ वर्ष लागेसँगै पुँजी बजारमा नयाँ उत्साह थपिएको हो । सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा बजारमा आउने क्रमले अब तेजी लिनेछ । तरलता अभाव पनि विस्तारै सहज हुँदै जाने अपेक्षा छ । यसले बजारलाई उचाल्न सहयोग पुगेको हो । तर पुँजी बजारमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने बैंक ब्याजदर घटेको अवस्था भने होइन ।
धितोपत्र बोर्डले सेमि अनलाइन प्रणाली सुरुवात गरेकाले पनि लगानीकर्ताहरु केही उत्साहित भएको विश्लेषण गरिंदैछ । यसले भविष्यमा पूर्ण अनलाइन ल्याउनका लागि थप सहजीकरण गरेको छ । प्रविधिमा निरन्तर सुधार हुँदै गएकाले बजारको भविष्यका बारेमा लगानीकर्ताहरु थप सकारात्मक बन्न पाएका हुन् ।
यसैगरी, अब धमाधम चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको रिपोर्ट आउन थाल्नेछ । तेस्रो त्रैमासमा सूचीकृत कम्पनीहरुले आकर्षक नाफा कमाउने लगानीकर्ताहरुको विश्वास हो । तर एकाध बाहेक सूचीकृत कम्पनीहरुको रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको अवस्था भने होइन ।
कतिपयले पुँजी बजारमा अब विस्तारै सिजनको प्रभाव पनि देखिन थालेको बताइरहेका छन् । अब ३ महिनापछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेछ । त्यसपछि कम्पनीहरुले वर्षभरिको कमाईको विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् । त्यसपछि लाभांश घोषणा गर्ने र साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यही भएर अब विस्तारै सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुने अनुमान गरिएको हो ।
नेप्से सूचक मंगलबार ३३.६१ अंकले बढेर १३३१.१८ विन्दुमा आइपुगेको छ । समग्रमा बजार २.५९% ले बढेको हो । कुल १६६ कम्पनीको ९६ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको छ । यो कारोबार रकम निकै उत्साहप्रद हो । कारोबार रकम अधिक हुँदा बजारमा कारोबारी प्रशस्त आएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । कुल १६६ कम्पनीको १९ लाख १० हजार २२८ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् ।
नेप्सेमा १० वटा समूहको सेयर कारोबार भएकामा ट्रेडिङ बाहेक बाँकी सबै समूहका सूचकमा हरियाली छाएको छ । सबैभन्दा धेरै बिमा समूह ३६०.४३ अंकले बढेको छ । यता, माइक्रोफाइनान्स समूह १२०.११ अंक र होटेल समूह ८६.०१ अंकले माथि लागेका छन् । बैंकिङ समूहमा भने १२.२ अंकको मात्रै तेजी आएको छ ।
सबैभन्दा धेरै सूर्या लाइफ इन्सुरेन्सको ५ करोड ९९ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः नेपाली लाइफ इन्सुरेन्स र कुमारी बैंक परेका छन् ।
कारोबार रकमका आधारमा प्रमुख १० कम्पनी
सेयर बजार नेप्से आकर्षक लाभ
किसान बहुउद्देश्यीय सहकारीले ल्यायो 'मिस्डकल बैंकिङ' सेवा
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा सहारा नेपाल साकोसको अभियानलाई आर्थिक सहयोग
सेञ्चुरी बैंकले आफ्नो सम्पूर्ण कर्मचारीको कोरोना बीमा गराउने
काठमाडौँमा फेला परे दुई सय जमाती, कोरोना रिपोर्ट आज आउने !
शनिबार, १३ बैशाख २०७७
लकडाउन प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी राहत प्याकेज ल्याउन नेपाली कांग्रेसको सुझाव
कोरोनाकाे कहर - विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ लाख ४४ हजार नाघ्यो, ५४ लाख २० हजार बढी संक्रमित
चीनले नेपालका चार जिल्लामा ३६ हेक्टर भू–भाग मिचेको तथ्य सार्वजनिक
महाकाली सन्धिमा गम्भीर राष्ट्रघात, २३ वर्षपछि परराष्ट्रमन्त्रीले स्वीकारे गल्ती !